I-Forest villa enebhishi langasese, i-sauna nendawo yomlilo
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Daniel
Le villa ethokomele engu-85 sqm izungezwe ihlathi elimangalisayo ekhoneni. Kusele imizuzu eyi-15 kuphela ukusuka enkabeni enhle yaseLuleå. Igceke elingemuva linikeza ukufinyelela olwandle oluyimfihlo lokubhukuda, ukudoba, i-kayaking noma ukushushuluza ebusika. Ubusuku bungasetshenziswa enye yezindawo zokubasa umlilo (eyodwa ingaphakathi endlini nezimbili ngaphandle) noma uma unenhlanhla izibani ezinhle zasenyakatho zingakubeka umbukiso esibhakabhakeni. Jabulela i-sauna yendabuko yamapulangwe eshisayo yaseFinnish.
Kukhona i-sauna yase-Finnish eshisisa ngokhuni egcekeni elingemuva elibheke itheku. Shisisa ngaphambi kokuthatha idiphu eqabulayo emanzini. Noma ebusika ziphonsa eqhweni elijulile imitha uma unesibindi.
Izivakashi zinokufinyelela okuyimfihlo engadini enkulu enamagumbi okuphumula amaningana angaphandle ukuze zizipholele ehlobo nasekwindla. Lungiselela isidlo sakho se-barbecue ku-grill enkulu egcekeni elingemuva noma iqhude emlilweni ovulekile noma ku-Muurikka yendabuko.
Imvelo ilungile ngasemnyango. Thatha uhambo oluphumuzayo ehlathini eliseduze noma uhambe esitimeleni esihle esigijima komunye wemizila eminingi egijimayo. Le ndawo iyipharadesi lezazi zezinyoni ezinamadada nezinkozi zasolwandle nezinye izinyoni eziningi ezihlala njalo endaweni. Uma unenhlanhla ungase futhi ubheke iNkosi Ebabazekayo Yasehlathini: i-moose.
Uzobe ulala ekamelweni elinombhede olingana nenkosi (abantu ababili) elinelineni elihle lombhede namakhethini amnyama ukuze ugweme ilanga laphakathi kwamabili ukuthi liphazamise ubuthongo.
Ikhishi livuselelwe ngokuphelele ngo-2020 futhi lifakwe ngokuphelele isitofu sokungeniswa, ihhavini, imicrowave, ifriji kanye neqhwa, isiphuzo sekhofi seMoccamaster kanye netafula elikhulu lokudlela. Ikhishi libheke itheku kanye negceke elihle elingemuva.
Igumbi lokugezela linephansi elishisayo ishawa nomshini wokuwasha kanye nesomisi. I-shampoo yemvelo kanye nokhilimu wokugeza kuyatholakala.
Nethezeka kwesinye sezihlalo eziseduze neziko elisendlini yokuphumula. Noma bheka izinkanyezi ngemva kokuhlwa. Ekamelweni lokuphumula izivakashi zingaphinda zikhululeke kosofa futhi zibukele imuvi ku-tv yesikrini esikhulu ngokufinyelela ku-Apple TV, i-Netflix, i-HBO, i-C kanye ne-Spotify.
Izivakashi nazo ziyakwazi ukufinyelela ihhovisi lasekhaya eliphelele uma udinga ukwenza umsebenzi othile. I-WiFi yamahhala iyatholakala.
Kukhona ibha egcwele kahle lapho ungaxuba khona ama-cocktails akho. Izithako zivumela ama-cocktail amaningi endabuko kanye nokuzama ngokwakho. Ama-cocktail angajatshulelwa ngemali encane ekhokhwa esizeni noma ngesikhathi sokuphuma.
Ubusuku behlobo obukhanyayo busetshenziswa kangcono endaweni yokuphumula engaphandle ngasogwini lolwandle. Nethezeka ku-hammock noma ujabulele isidlo sakho sakusihlwa etafuleni lokudlela ngenkathi ujabulela ilanga laphakathi kwamabili phezu kwetheku.
Ebusika ungalindela iqhwa eliningi (ngokuvamile kusukela ngoDisemba kuya ku-April). Uma izimo zilungile ungaya eqhweni echwebeni uqonde ngemuva kwegceke. Noma kungani ungazami ukubamba i-perch noma i-pike ngokudoba kwendabuko kweqhwa. Uma uthanda ukushushuluza, kukhona amathrekhi okushushuluza akhanyayo appr 10 min kude nendlu.
Indawo ethule kakhulu futhi eqhelile. Jabulela ukuthula kanye nemisindo yehlathi. Omakhelwane abaseduze yizindlu zasehlobo kanti izinsuku eziningi akekho ohlala ezindlini zasehlobo. Kunomakhelwane oyedwa ohlala unyaka wonke. Okuvame kakhulu ukudlula abantu abagibela ihhashi ukusuka esitebeleni esiseduze.